အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: June 2009
အမြင့်တက်ခြင်း၏ ဝီရ ရသ
ယုံကြည်မှု ပြည့်ဝသူသာ ရဲရင့်
ဘဝမှာ စွန့် စား ဝံ့တယ်.
ပင့်ကူ ငယ်ငယ်.. ဂူခေါင်မိုးပေါ်တက်နိုင်တယ်။
ဒါကြောင့် ကျနော် အမြင့်တက်ဖြစ်တယ်။
အမြင့်တက်သမား Mike Robertson
ကြောက်ရွံ့ ဆုတ်သူ အရှုံးကိုဝယ်သူ
စွန့် ရဲမှသာထာဝရ ရှင်သန်နိုင်မည့်သူ
ခေါင်းငုံခံသူ လူသေနဲ့ ဘ၀မခြား
စိတ်ခွန်အားသည်..ခန္ဓာ၏ ရှေ့ သွား
လောကမှာ ဘာမှ မဖြစ်နိူင်တာမရှိဖူး။
ယိမ်းလိုက်တဲ့ ခန္ဓာ..တုန်ခါတဲ့ ဒူးများ
ကျွန်တော် မကြောက်တတ်ဖူး ထင်ပါသလား။
ကျနော်လည်း လူထဲက လူသား
လူလုပ်ထားတဲ့ အဆောက်အဦ တွေ
ကြိုးနဲ့ကရိယာမလို..
ဒီ ပုံပမာ ကျနော်သက်သေပြတယ်။
အစ ရှိရင် အဆုံးရှိရမယ်
မှန်မှန်သာ ကြိုးစား၊ သက်လုံကောင်း မရပ်မနား.
ပြင်သစ် အီဖဲမျှော်စင်နဲ့ ..
Lloyd’s of London အဆောက်အဦ
တိုက်ရဲရင်..ရရမဲ့ FREE BURMA
ပန်းတိုင်ဟာ..ကျနော်တို့အနားမှာရှိတယ်။
မသဒ္ဓါ ( ၆။၂၉။၂၀၀၉)
ဗြိတိန်အမြင့်တက်သမား ရဲ့ လန်ဒန်မြို့က လွိုက်ဒ်စ် အော့ဖ် လန်ဒန်(Lloyd’s of London) အာမခံ ကုမ္ပဏီကြီး ရှိတဲ့ အဆောက်အဦးကို တွယ်တက်ပြီး မြန်မာ နိူင်ငံအတွက် စွန့် စားဆန္ဒပြခဲ့တာပါ။
အထပ် ၁၄ ထပ်ရှိပြီး အမြင့်ပေ ၁၉၀ နီးပါးရှိတဲ့ အဆောက်အဦးကြီးကို ကြိုးမပါ၊ ထောက်ကူပြုပစ္စည်းမပါဘဲ အနောက်တိုင်းဝတ်စုံအ ပြည့် ဟန်ကျကျဝတ်ဆင်ပြီးတွယ်တက်ခဲ့သူကတော့ အသက် ၄၇ နှစ်အရွယ် မိုက်ခ် ရောဘတ်ဆန် (Mike Robertson) ဖြစ်ပါတယ်။
Mike Robertson climbs the Lloyds building in the City of London, June 18th 2009. It wasaprotest against Lloyds of London's continuing financial involvement with the Burma generals.
MIKE ROBERTSON CLIMBS EIFFEL TOWER IN NOVMBER 2007 TO PROTEST TOTAL'S ACTIONS IN BURMA. HE ALMOST MADE IT TO THE TOP! A FILM BY NICOLETTA FAGIOLO
ဗြိတိန်နိုင်ငံသား အမြင့်တက်သမားတဦးဟာ လန်ဒန်မြို့က လွိုက်ဒ်စ် အော့ဖ် လန်ဒန် (Lloyd’s of London) အာမခံကုမ္ပဏီကြီးရှိတဲ့ အဆောက်အဦးကို တွယ်တက်ပြီး “Leave Burma” “မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ စာတမ်းကြီးကို ချိတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မှာမှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အခုလိုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲဒီအမြင့်တက်သမားကို ကိုကျော်ကျော်သိန်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးထား ပါတယ်။
အထပ် ၁၄ ထပ်ရှိပြီး အမြင့်ပေ ၁၉၀ နီးပါးရှိတဲ့ အဆောက်အဦးကြီးကို ကြိုးမပါ၊ ထောက်ကူပြု ပစ္စည်းမပါဘဲ အနောက်တိုင်းဝတ်စုံအပြည့် ဟန်ကျကျဝတ်ဆင်ပြီးတွယ်တက်ခဲ့သူကတော့ အသက် ၄၇ နှစ်အရွယ် မိုက်ခ် ရောဘတ်ဆန် (MikeRobertson) ပါ။ ဘာ့ကြောင့် အခုလိုလုပ်တယ်ဆိုတာကို သူက ပြောပြရာမှာ…
“လွိုက်ဒ်စ်ကုမ္ပဏီဟာ မြန်မာလူထုအပေါ်မှာ တာဝန်ရှိတာမို့ ကျနော် ဒါကို ရိုးရိုးလေးလုပ်တာပါ။ ဒါ့အပြင် ဒီကနေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့လည်း ဖြစ်နေတဲ့အခါကြတော့ နောက်ထပ် အကြောင်းရင်းတခု ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။”
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ အထပ်မြင့် အဆောက်အဦးတွေ အများကြီးရှိတဲ့ထဲကမှ ဘာ့ကြောင့်လွိုက်ဒ်စ်ကုမ္ပဏီရှိတဲ့ ဒီအဆောက်အဦးကိုမှ ရွေးရတာပါလဲ၊ မိုက်ခ်ရဲ့အဖြေကတော့ဒီအဆောက်အဦးထဲမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ ငွေကြေးပတ်သက်တာတွေ အများကြီးရှိနေလို့ပါတဲ့။
“အဲဒီ လွိုက်ဒ်စ်ကုမ္ပဏီရှိတဲ့ အဆောက်အဦးထဲမှာ မြန်မာဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ ဘဏ္ဍာငွေကြေးကိစ္စ ဆက်ဆံတာ တွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။ သူတို့က အရေးမကြီးသယောင် လျှော့ပြီးပြောနေပေမယ့် ငွေကြေးကိစ္စတွေမှာ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ပတ်သက်နေကြတာပါ။ ဒီ ဗြိတိန်မှာက အမေရိကန်နဲ့မတူဘဲ ဘဏ္ဍာငွေ စီးဆင်းမှုဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့အရေးယူထားတာတွေ မရှိဘူးလေ။ အာမခံတွေ ရောင်းခွင့်ပြုထားပြီး
မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ လေကြောင်းလိုင်းတွေနဲ့ သင်္ဘောလုပ်ငန်းတွေကို အထောက်အပံ့ပြုနေပါတယ်။”
လွိုက်ဒ်စ်ကုမ္ပဏီဟာ အာမခံကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံက လေကြောင်းလိုင်းတွေ၊ သင်္ဘောလုပ်ငန်းတွေကို အာမခံထားတဲ့နေရာမှာ ပတ်သက်လုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့အတွက် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူတွေက ဝေဖန် တိုက်ခိုက်တာကို ခံနေရတဲ့ ကုမ္ပဏီပါ။
အခုလို တက်ခဲ့တဲ့အတွက် မိုက်ခ်ကို လန်ဒန်ရဲက ဖမ်းဆီးပြီး အေးချမ်းမှုကို နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးမှု၊ ခွင့်ပြု ချက်မရဘဲ ပိုင်နက်ကျူးကျော်မှုနဲ့ စွဲချက်တင်ထားပြီးအမှုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဒီလိုအဖြစ်နဲ့ ကြုံရပေမယ့်လည်း မိုက်ခ်ကတော့ နောင်တ မရဘဲ သူ လုပ်သင့်တာကို လုပ်ခဲ့တာပါလို့ ပြောပါတယ်။
မိုက်ခ် ရောဘတ်ဆန်ဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတုန်းကလည်း ပြင်သစ်နိုင်ငံကကမ္ဘာကျော် အီဖယ်လ် မျှော်စင်ကြီးကို တက်ရောက်ခဲ့သေးပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာပြင်သစ်ပိုင် တိုတယ်လ်ရေနံကုမ္ပဏီရဲ့ စီးပွားရေး ပတ်သက်နေတာကို လူအများသိပြီးရှုတ်ချပြစ်တင်လာအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 12:46 AM0comments
ဒို့ အားလုံး အတူတူ..
ဒို့ မွေးတဲ့ ဥကျင်းမှာ..
သူတို့မပေါက်ခဲ့ပါဖူး..
ဒို့သောက်တဲ့ မြစ်ဧရာ
ဒို့ စိုက်တဲ့ စပါး
ဒို့ တွေ လို သူတို့ မခံစား..
အမှန်တရား ပျောက်နေတဲ့ မြန်မာ..
အပြုံးတွေ ပျောက်နေတဲ့ မြန်မာ
စစ်သားထုရဲ့ မုဒိန်းကျင့်ခံနေရတဲ့ မြန်မာ
တရားဥပဒေပျောက် အမှောင်ထဲက မြန်မာ
လူလူချင်းမစာထောက် ဘီလူးတွေအောက်က မြန်မာ
မွေးရာပါလူ့ အခွင့်အရေး အငွေ့ ပျံခြောက်နေတဲ့ မြန်မာ..
ပြည်သူရဲ့ ဂုတ်သွေးကို စစ်တပ်က သောက်နေတဲ့ အခါ
သိုးငယ်ကိုအပြစ်ဖွဲ့ ရေကြည့်နှောက်နေတဲ့ အခါ
တတ်နိုင်သမျှ ထွေးကူတဲ့ သူတို့ ရဲ့မေတ္တာ
ဘာမှ အဆိုးမြင်ဝါဒီ မဟုတ်ဖူး..
ဘာမှ နယ်ချဲ့မှ မဟုတ်ဖူး..
လှပတဲ့ မြန်မာ့ ရေမြေတောတောင်နဲ့ ..
စစ်သား(၅) သိန်း ဖနောင့်အောက်က
ရဟန်းသံဃာ မေတ္တာ ဘာဝနာ
သူတို ဟာ အသားရောင်မျိုးစုံ.
သို့ သော် မြန်မာမြေကို..
သူတို့ ချစ်တာ ဖြူစင်တာအမှန်
နိုဘယ်ဆု ရွေးချယ်သူများအဖွဲ့ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဆုတံဆိပ်ချီးမြှင့်သူများအဖွဲ့ 
လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကြိုးစားပေးသူများအဖွဲ့ 
လူသားချင်းစာနာ လူစိတ် ငွေအား.စေတနာဖြင့်
Dalai Lama. Betty Williams နှင့်
Prime Minister Gordon Brown နှင့်
64 for suu.org နဲ့ ထောက်ခံသူများ
Burma VJ ဖန်တီးရှင်များ
Laura Bush, Hillary Clinton နှင့် Madeleine Albright
Amnesty International, Red Cross, WHO, FAO,
အခြားသော NGO အဖွဲ့များ
အဆိုတော် U2 က Bono , Paul McCartney,
Black Eyed Peas, KT Tunstall R.E.M, Drumer Swiss Chris,
Jane Birkin , “Unplayed Piano” Damien Rice & Lisa Hannigan
သရုပ်ဆောင် Jim Carrey, Yoko Ono, George Clooney,
Brad Pitt, Sylvester Stallone နှင့်
Burma: It Can't Wait Celebrity Campaign အဖွဲ့ သားများ
စွန့် စားအမြင့်တက်သမား Climber Mike Robertson,
ခြေပလာလျှောက်သူ Ewen Hardie,
ကဗျာဆရာ Jeffrey Hellman,
Burma Campaign USA နဲ့ UK အဖွဲ့ သား
မြန်မာblog တွေ ကြား သတင်းပေးတဲ့ Happy
အမည် ရှိသော်လည်း ကျမ မသိ
ကျမ တို့ ဂုဏ်ယူ..
ကမ္ဘာ့ အ၀ှမ်းမှ မြန်မာ့ချစ်ဆွေများသို့ 
တနေ့ နေ့ တစ်ချိန်ချိန်..
သင်တို့ ၏ ချွေး..သင်တို့ ၏သွေး.
သင်တို့ ၏ မေတ္တာ..သင်တို့ ၏ဂရုဏာ..
ထားခဲ့မဲ့ မြန်မာရဲ့ သမိုင်းပန္နက်တင်..
မသဒ္ဓါ ( ၆။၂၈။၂၀၀၉)
မြန်မာ့ အရေး လှုပ်ရှားပေးကြသူ နိုင်ငံခြားသား များ (သို့ မဟုတ်) သွေးချင်းမနီးသော ဆွေမျိုးများသို့ကျေးဇူး တင်လွှာ
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:50 AM2comments
ချောအိသိမ်းရဲ့ အနုပညာအား စားသုံးခြင်း။
ရင်ဘတ်နဲ့ အမျှ ခံစားကြည့်ပါ။
သံဃာ့ မေတ္တာတရား. လမ်း
အလဲလဲ အပြိုပြို လူတစ်စု
ဒို့ ခေတ်ရဲ့ ရာဇ၀င်ကြမ်း။
ရက်စက်တာ ဒီ စစ်တပ်ပေါ့။
ထောင်ကျနေတဲ့ မြန်မာ့ ကလေးငယ်..
သူတို့ ကလွဲ ဘယ်သူမှရှိမနေဖူး။
Performance art (သို့ မဟုတ်)
ခန္ဓာကိုယ်ရွေ လျှားမှု အလင်္ကာ
နှလုံးသားနဲ့စားသုံးပါ။
ပူပုံပန်းနဲ့ဆံပင်နောက်တွဲ
ပင်နီအကျီ င်္နဲ့ချိတ်ထမီ..
မြန်မာ အမျိုးသမီးထုသို့ကိုယ်စားပြုသည်။
မြန်မာ မိန်းမသားထု ကိုစာနာတဲ့သူ
ကျမတို့ ၏ အလင်းရှင်..
အနီရောင်၏ နီရဲခြင်း .
ပန်းလို နူးညံ့ငြား ဆူးများ နဲ့ တိုက်မည်။
တနေ့ မှ အမေ့ရင်ခွင်မှာ ပြန်ထွေးထားမယ်။
ငြိမ်သက်သော အမျိုးသမီးများ၏ အသံ
အောင်ဆန်းမျိုးဆက်တို့ ရဲ့ သွေးစက်..
မတရား အကျဉ်းကျခဲ့တဲ့ အမေ
တနေ့ နေ့ တချိန်ချိန်..
ပြာပုံပေါ်က ပြန်နိုးထမဲ့ ဖီးနစ်ရဲ့ အသက်..
အပြာရောင်၏ မိုးသားတနေ့ များမှာ..
(၆၄) နှစ်သော မွေးနေ့ လွန်မြောက်
အမေနဲ့ကျမတို့ အတူတူ..
သွေးချင်းဆက်ယူ နိုင်ငံသစ်ကို ထူမယ်..
တယောက်ထဲမို့အားမငယ်။
မွေးနေ့ မှသည် သက်တော် ရာကျော်ရှည်ပါစေ။
မသဒ္ဓါ ( ၆။၂၄။၂၀၀၉)
အမျိုးသမီးအနုပညာရှင် မချောအိသိမ်းရဲ့ Performance art အားဓါတ်ပုံ များမှ တဆင့် ခံစားထားပါသည်။ အပြင်မှာ တခါမှ မမြင်ဖူးပါ။ တွေ့ဖူးချင်ပါသည်။ သူမ၏ ရည်ရွယ်တင်ပြမှုအား ကျမ၏ အနုပညာ အာရုံခံစားမှု မှားယွင်းပါက..ကျမ၏ ညံ့ဖျင်းမှုသာ ဖြစ်ပါသည်။
ရှားပါးသော မြန်မာ အမျိုးသမီး Performance art ပညာရှင် ညီမလေးအတွက် အထူး ဂုဏ်ယူပါကြောင်း…
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 6:09 AM0comments
အဖေ့ ကို ခု ချက်ခြင်းလွှတ်ပေး.....
ဧည့်သည် အိမ်လာ.. သောက်စရာ ကမ်းတယ်.
အလှူကို လာရင် လက်ဖက်ကမ်းတယ်။
အသုဘပို့ ရင် ယပ်တောင်ကမ်းတယ်။
ကျမ အဖေ..အင်းစိန်ထောင်ရှေ့ 
အဖေ့ကို ကျမတို့ လွမ်းသည်။
တနပ်စားနဲ့ဘုန်းကြီိးကို မရိုက်ဖူး
ကျမတို့မိသားတစ်စု
ရှိမဲ့စုမဲ့ နဲ့အမေ ထမင်းဆိုင်..
ဖွင့်ပိုင်ခွင့် မရှိဖူး ပိတ်ရမယ်..
အဖေက ဒို့ အရေးအော်ဖူး လို့ တဲ့..
ဒါဆို လမ်းထိပ်က ယောက်ျား တအုံးအုံးနဲ့ 
အမေ ကျ ဘာလို့ မရှိရတာလည်း။
သမီးတို့ လည်း မြန်မာဘဲလေ။
သတင်းစာထဲ နာမည်မဲမဲကြီးနဲ့ 
ဗိုက်ဖောင်း အဆီပွ.. စစ်ဗိုလ် ရွှေဘဘတို့ ရေ
ကလေး တပြုံတမ ဆာလောင် ငိုယိုတဲ့ အခါ
အမေ မျက်ရည်ကျ. ဝေနေတာ မီးသောက
ရနှစ်သမီး ကျမ ကြည့်ရက်ပါ့မလား..
ဆိုးလိုက်တဲ့ ဘ၀. ကျမတို့ ခေတ်ကျမှငတ်တယ်။
အလုပ်မရှိ အစာမရှိ ကျန်းမာရေးမရှိ..
လိင်ကျွန်များပြား AIDS ထိ
ကျမတို့ဘဘအရွယ်အထိ
ကျမ တို့ လူဖြစ်မှဘဲ
ပြတ်လိုက်တဲ့ လျှပ်စစ်။ တစက်စက်ကျတဲ့ ဘုံဘိုင်ရေ။
သန့် သလားတော့မမေးနဲ့ ဒါ ရွှံ့ နှစ်ရေ
သံကောင်အပြည့်နဲ့ကျမတို့ဝမ်းဗိုက်တွေ..
ဖောက်ပြန်တဲ့ ရာသီ..နအဖ မင်းကျင့်တရားနဲ့ အညီ။
ဒါ ကျမနေတဲ့ မြန်မာပြည်။
ဆောက်လိုက်တဲ့ဆည်။ ရောင်းလိုက်တဲ့ဓါတ်ငွေ့ 
ဒါ ကျမနေတဲ့ မြန်မာ။
စစ်တပ်အတွက် လုယက်တဲ့ သီးနှံ။
ဒါ ကျမနေသည့် မြန်မာ။
ကြီးလေးတဲ့ အခွန်။ ဘယ်နေရာမှမစွံ ဖူး
ဆင်းမရ ရေလျှံ. ပြည့်နေတာ မြောင်းထဲက အမှိုက်။
တ၀ီဝီနဲ့ ယင်။ သွားလိုက်တဲ့ဝမ်း..
ယားနာဝဲနာ..ချိူးဖို့ရေ မဆိုထား.
သောက်စရာတောင် ရေသန့် မရှိ
အိမ်သာထွက် လက်ဆေးစရာ ရေမရှိ
မိသားစုဘ၀.. လူတိုင်း တမ်းတခုံမင်
ဘဘတို့ လည်း မိသားစုရှိကြတယ်။
အိမ်ဦးစီးမရှိတဲ့ အိမ်ထောင်၊ ရှာစားမရတဲ့ စီးပွါး..
အပြစ်မဲ့ လူဖြစ်လာတဲ့ လူသားတွေ..
အရွယ်မမျှတဲ့ ဒုက္ခ များနဲ့ 
လူ့ အခွင့်အရေးဆိုတာ ရှိသင့်တယ်..ဘ၀မှာ..
လူ့ အခွင့်အရေးဆိုတာ ရှိသင့်တယ်..မြန်မာမှာ..
" ခု…ကျမ အဖေကို ပြန်လွှတ်ပေးပါ။ "
နွမ်းနေသော မျက်နှာကလေးနှင့် အမည်မသိ သမီးငယ်လေးသို့ 
" သမီးဖေဖေ မကြာခင် အိမ်ပြန်လာနိူင်မှာပါ.."
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 9:05 PM2comments
အသေခံချစ်ထိုက်သူမို့အသက်ပေးချစ်ဝံ့သည်။
အညှိုးဖွဲ့မယ် သိတယ်။
မိသားစုနဲ့ ဝေးရာ ထောင်ပို့ မယ်သိတယ်။
မိသားစု ထောင်ဝင်စာ မပေးမှာသိတယ်။
စွမ်းအားရှင် တုတ်မိုးမယ် သိတယ်။
လူအုပ်တည့်တည့် ပစ်မယ် သိတယ်။
မသေမရှင်..မီးရှို့ ဖျောက်ဖျက်မှာ သိတယ်။
လူကောင်းများရဲ့ သစ္စာ သမာဓိ..
ဘယ်မုန်းမာန်ဘဲဖွဲ့ ဖွဲ့ 
အမေ ကိုယ်ပေါ် ဆူးတစ်ချက်မကျစေရဖူး.
အမွှေး တစ်မျှင်တောင် မကျွတ်စေရဖူး..
အမေ့ ချွေးတစ်စက် မသက်ရဖူး..
အမေ့ မျက်လုံးစို မျက်ရည် မငိုစေရဖူး.
အသက်စွန့် မယ် အမေ့အတွက်..
အမေ့ သာ ကျမ်းမာအောင် ကြိုးစား..
သက်စေ့ချိုးဌက်တွေ တူတူ လွှတ်ကြမယ်..
အမေရေ... အားမငယ်နဲ့ ..
အမေ့အသက် ရာကျော်ရှည်ကြောင်း..
မသဒ္ဓါ ( ၆။၂၀။၂၀၀၉)
Aung San Suu Kyi's birthdayAbout 300 members of the National League for Democracy heldaparty for Myanmar's detained pro-democracy leader Aung San Suu Kyi to mark her 64th birthday. The anniversary has been the focus ofaworldwide campaign to pressure the military junta to release her from detention.
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 5:53 AM0comments
အမေ၏ မေတ္တာအား ချီးမြှောက်ခြင်း
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:01 PM0comments
မြန်မာ၏ အစ..မြန်မာ၏ အဆုံး.
" မြန်မာအစ တကောင်းက " ၊
" မြန်မာအစ ကျောက်ဆည်ကူမဲက " ၊
" မြန်မာအစ ပုဂံက " ၊
'' မြန်မာအစ မြန်မာ"
တိဗက်လူများ နဲ့ သွေးနှော..
တိဗက် မြန်မာမျိုးနွယ်စု မှ
အရှေ့ကို လားသော် ကမ္ဘောဒီးယား၊
တောင်ကို လားသော် ပင်လယ်၊
အရှေ့တောင် လားသော် ယိုးဒယား
အနောက်ကို လားသော် အိန္ဒိယ
အာသံ၊ မဏိပူရ၊ ဗြဟ္မပုတ္တရမြစ်ဝှမ်း
မဇ္ဈီမ ဒေသ၏ ဗြာဟ္မဏ၀ါဒလွမ်းမိုး.
ပင်းယ, အ၀ (အင်းဝ),
ဓားထက်လာတာ ဒို့ ဗမာ
တိုက်ဖျက်ခဲ့တာ ဒို့ ဗမာ
ကျောက်ဆည်က စ..မစ တော့ မသိဖူး..
မြန်မာ စကားမတတ်တဲ့ တရုတ်ရဲ့နယ်.
ခွေးလို နေရာမရတဲ့ မြန်မာ
တွေ့ ချင်ရင် ထမင်းထုတ်နဲ့လည်ရှာ
နေရာတိုင်းမှာ မြန်မာ ရှိတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျမတ်ို့ 
အဆိုးဝါးဆုံး စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်
မသဒ္ဓါ (၆။၁၈။၂၀၀၉) ဘ၀တူများသို့ ..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:50 PM0comments
ကျမ အဖိုး နဲ့ နေရွှေသွေးအောင်၏ အဖိုး
ကျမ အသက် (၈) နှစ်..
မီးသီးနဲ့အပူပေး..
ဒါ..ကျမ ငယ်ငယ်က ပုံပြင်
အဖိုးဆိုတာ မြေးတွေ ရဲ့ ရှေ့ ဆောင်ပါဘဲ
ဆန်လုံးလေးတွေ ကြဲ သူလှု
အတောင်ကျိုးဌက်..သူ အစာရေစာဆက် ပြုစုကူ
ကားတိုက်သေ ပုပ်စော်နံ့ တဲ့ ခွေး..
အမှိုက်ရှုပ်တဲ့ လမ်း သူ သန့် ရှင်းပေးတယ်။
ညည လသာချိန် မြေးတွေ ပေါင်ပေါ်တင်
ကျန်စစ်သား ကအစ..ဘုရင့်နောင် အလောင်းဘုရား
မြန်မာ့ လက်ရုံး စစ်အာဇာနည်များအကြောင်း
အောင်ဆန်းဟာ သူ့ အတွက်တော့ သူရဲကောင်းကြီးဘဲ
အဖိုးအမြင်တွေနဲ့ .ကျမ အမျိုးကို ချစ်မြတ်နိူးတတ်တယ်..
ကျမအဖို့ တော့ အဖိုးဟာ ကျမရဲ့ သူရဲကောင်းကြီးဘဲ။
ကျမမြေးတွေ ကျ လည်း အဲဒီလိုသင်မယ်..
မိမိ အမျိုးဂုဏ် ဒီလိုဘဲ ဂုဏ်တင်တတ်ရမယ်။
ကျမ အဖိုးက ဘယ်သူမှမဟုတ်ပါဖူး.
နေသွေးအောင် အဖိုးလို ရုပ်ကြမ်းကြီးနဲ့ ဖြဲနေသူမဟုတ်ဖူး
စစ်အပြီး လယ်လုပ်စားတဲ့ သာမာန်လူ.
အဖြေ အခုထိစဉ်းစားမရ တဝေ့လည်လည်.
ရွှေနေသွေးအောင်ရဲ့ အဖိုး..မိုးပေါ်က ကြယ်ကလေးရဲ့ အဖိုး..
သူမြေးကို ဘာတွေ သင်ပေးမလည်း..
ငါ့ မြေး အသေမှတ်..ထမင်းမငတ်ဖူး “ဘဲသင်မလား..
“ မရရင် ခိုး..မပေးရင် လုယူ..ရရင် ဘိန်းအ၀ ရှူ..
သူများ မျက်ခုံးပေါ် ဇင်္ကြန်လျှောက်သူ..ဒီလူမှ တော်..
မော်ဒယ် တစ်ည ဆယ်ယောက်
ကျောင်းမှာ..အီးအီးပါဖို့အိမ်သာ သီးသန့် ဆောက်
အိုပစေ မသေသေးသ၍..ဒီထိုင်ခုံက ငါမဆင်း.ငါမဆင်း”
ဒီလို..လူပါးဝ အဖိုးနဲ့တဏှာကျမြေးဆိုး..
မြန်မာ ပြည် အောက်ကျ နောက်ကျ..
သွားနေတဲ့ road map က .မြောက်ကိုရီးယားဆီ။
သန်းရွှေဟာ ရွှေနေသွေးအောင် အတွက်..
နေသွေးအောင် ရဲ့မြေးတွေ အတွက်တော့..
ဒို့ လက်ထက်ကျ တပြားမရှိ..
သန်းရွှေ၏ မျိုးရိုးဖြစ်ရ ဂုဏ်မရှိ..
သံဃာသွေးကြွေး ကျုပ်တို့ အထိ ပြန်ဆပ်နေရ.
အသုံးမကျတဲ့.. ဒို့အဘေး
မြန်မာကို စုန်းစုန်းမြူပ်စေတဲ့ အာဏာရှင်.
လူမျိူးပြန်း သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ လူသတ်သမား..
မသဒ္ဓါ ( ၆။၁၇။ ၂၀၀၉)
နာကြင်နေတဲ့ သူကို ကူညီတာ သာမညလေးပါဘဲ ။ ဒါပေမဲ့ ဒါ..လူတိုင်း မလုပ်နိုင်ဖူး။
ဆာနေတဲ့ သူအစာကြွေး အရိပ်ပေးနားခိုစေတာ.. အသေးအဖွဲလေးပါဘဲ။
ဒါပေမဲ့ အကူညီခံရသူအတွက် တသက်စာကျေးဇူး မမေ့နိုင်ပါဖူး။
ညည်းသံကြားပြီး..၀င်းထရံဘေး လဲနေတဲ့သူ..ဒီလူဟာ သူပုန်ဖြစ်ဖြစ် စစ်သားဖြစ်ဖြစ်
သူတောင်းစားဖြစ်ဖြစ်..ယက်တောဘဲဖြစ်ဖြစ်..ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို အာဇာနည် မဆိုထားနဲ့ကျမ မသဒ္ဓါ သာမန်ညောင်ည မိန်းမ တောင် ကူညီရဲတယ် ကူညီမယ် ဆိုတဲ့နောက်..
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမည်ခံ..စစ် အဆိုးရမင်းများ..မကယ်နိုင်လောက်အောင်၊ ကယ်ချင်တဲ့ သူကို ဒုက္ခရောက်အောင် ယုတ်မာတာ..အမဲမှတ် ဖျက်မရတင်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလေ မြန်မာ..မြန်မာ..ကမ္ဘာကျော်ပါပေါ့.. ( ပထမ တစ်ခါ ကနာဂစ်.. အခုတခါ က.ယက်တော တပ်မတော် သဘောထားရဲ့ တကဲ့အမှန်..မှတ်ကျောက်အတင်ခံခဲ့ပြီ)
အဖိုးရေ..ကျမ သန်းရွှေမြေးမဖြစ်…အဖိုးမြေးဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူပါတယ်တော့။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 5:16 AM 1 comments
နောက်ဆုံးကျည်တစ်တောင့် ၏ လားရာ
သူ့ ရဲ့ လက်ဖျောက်တစ်ချက်တီးတာနဲ့ 
လူတွေ အပြုံလိုက် တိတ်တဆိတ်ပျောက်သွားတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူက ပျောက်စေဆရာ တော့မဟုတ်ဖူး
သူ့ ရဲ့ မျက်စတစ်ချက်ပစ်လိုက်တာနဲ့ 
ဘုရား ၀တ္တကမြေ မှာ သွေးချင်းချင်းနီသွားတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူက မျက်လှည့်ဆရာ တော့မဟုတ်ဖူး။
သူ့ ရဲ့ လက်ညှိုး တစ်ချက်ထိုးတာနဲ့ 
တောတောင်တွေ တောင်ကတုံး ဖြစ်သွားတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူက တန်ခိုးရှင်တော့ မဟုတ်ဖူး။
သူ့ ရဲ့ ပါးစပ်က..စကားတစ်ခွန်းစတာနဲ့ 
ဟောင်နေတဲ့ ခွေးတစ်အုပ် ခေါင်းညိတ်တတ်လာတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူက ဆပ်ကပ်ဆရာ တော့ မဟုတ်ဖူး။
သူ့ ရဲ့ မျက်စောင်းတချက် ထိုးလိုက်တာနဲ့့
မြို့ ရွာတွေ မီးဟုန်းဟုန်းပြာကျသွားတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူက နဂါးတစ်ကောင် တော့ မဟုတ်ဖူး။
သူ လား..ဘယ်သူလည်း သိလား..
သူက လေဖင်ကျယ် အေဘီစီဒီ တောင် မပေါင်းတတ်ဖူး..
သူ ဘာမှ အရာမ၀င်..
တိုင်းပြည်အပြင်ဖက် တဖ၀ါး ချရဲသူမဟုတ်ဖူး.
ဘာစာမှ မတတ်..ဘာ အသိဥာဏ်မှ မရှိဖူး.
မိုက်ဂုဏ်နဲ့ဖြဲပြ...ဒိုင်ခြောက်ပြီး စားနေတာ။
သေနတ်မောင်း မျက်စိတစ်ဖက်မှိတ် ချိန်စရာမလိုပါဖူး။
မှန်အောင် တည့်တည့် ပစ်တတ်စရာမလိုပါဖူး။
မကောင်းသူထိပ် ကောင်းသူထိပ် ထိချင်ရာထိပစ်နိူင်တယ်။
တော်လှန်ရေး အတွက် အာဇာနည်ဆိုတာစတေးရဲ
ပြည်သူငွေနဲ့ ဝယ်တဲ့ ကျည်ဆန်များနဲ့ 
ပြည်သူ့ အရိုးကို တံတားထိုးသူ
ပြည်သူငိုတဲ့ မျက်ရည်များနဲ့့
မသဒ္ဓါ ( ၆။ ၁၀။၂၀၀၉)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 4:04 AM0comments
လူအတူတူပေမဲ့..တယောက်က အဖြူ..တယောက်က အနူ
သူတော်ကောင်းနဲ့ သူယုတ်မာ ကွာတယ်။
ကျော်ကြားမှူခြင်း ကတော့ တူပါလိမ့်မယ်..
နာမည်ကောင်းနဲ့ နာမည်ဆိုး ကွာတယ်။
ကြည့်တဲ့ မျက်လုံးတွေက မတူဖူး..
လေးစားတဲ့ အကြည့်မျိုး နဲ့ စက်ဆုတ်တဲ့ အကြည့်ဆိုး
လူတွေ လက်ဆောင်ပေးချင်တာကတော့ တူပါလိမ့်မယ်။
ပေးမဲ့ လက်ဆောင်က မတူဖူး..
ချစ်စရာ ပန်းတပွင့်နဲ့ထွီ ကနဲ အော့ကြောလန် တံတွေးတစ်စက်
လူတွေ ရဲ့စိတ်တွေ ကို စိုးမိုးနိူင်တာကတော့ တူပါလိမ့်မယ်..
ပြည်သူ့ မြတ်နိုးမှု ချစ်မေတ္တာနဲ ခါးသီးတဲ့ အမုန်းအာဃာတ
ရဲရင့် ရင်ကော့ရှိုက်တဲ့လေနဲ့ . ပုန်းရှိုးအပြင်မထွက်ရဲအိမ်ထဲရှူရတဲ့လေ။
အပြစ်မဲ့ စိတ်၏လွတ်လပ်မှုနဲ့ . အပြစ်ရှိလူတွေ ကြားမထွက်ရဲမှု
သတင်း တီဗီမှာ ပါတာခြင်းတော့တူတူဘဲ
ကြည့်သူ ကတော့ ကွာခြားတယ်...
ဂရုဏာနဲ့မျက်နှာမြင် ချစ်ခင်စရာ နဲ့မျက်နှာမြင် ဖနောင့်နဲ့ပေါက်ချင်စရာ။
ကြည့်ဖြူသဒ္ဓါချင်း ကတော့ ကွာတယ်.
သူများ ဝေမျှတဲ့ မေတ္တာ အစာနဲ့ ခိုးဆိုးလူယက် ဒါးပြရဲ့အစာ
ယုံကြည်စိတ်ချ.သူတပါးမေတ္တာရတဲ့ လူရဲ့ လုံခြုံစွာ နှစ်ခြိုက်အိပ်စက်ခြင်းနဲ့ 
ယုံမှားသံသယ.လုပ်ကြံနိုးနိုးကြောက်လန့် ရတဲ့ အိပ်မက်ဆိုး.
အပြင်သွားရင် လုံခြုံရေးကတော့ နောက်က ပါမှာ တူတူဘဲ..
အသေခံ ခုခံကာကွယ်မှာတော့ မတူဖူး.
အသက်ပေးမဲ့ အာကွယ်ပေးမဲ့ လူထု နဲ့ ..ငွေပေးထားတဲ့ စစ်သည်တစ်စု
ဖန်တီးမရတဲ့ လေးစားမှုနဲ့ ..အတုဖန်တီး ငွေပေး ဘုရားခေါ်စေမှု
လက်မထောင် နိူင်တာကတော့ တူတူပါဘဲ
အားအင်ပါတဲ့ လက်မောင်းတန်းလက်သီးနဲ့ ..ပုဆိုးခြုံတဲကထောင်တဲ့ လက်သီး
တယောက်က ပြည့်ဝ...တယောက်က နောက်ကျ
သေမင်း ကတော့ တနေ့ ကြုံရမှာပါဘဲ
ကြောက်ရွံ့ ကင်းစွာသေခြင်း နဲ့အတ္တမကင်းကြောက်ရွံ့စွာသေခြင်း
စည်ကားမှုကတော့ တူမယ် မဟုတ်ဖူး..
အများငိုကြွေးကြမဲ့ ဈာပန နဲ့ ..ပျော်ပွဲကျင်းပကြမဲ့ ခွေးမသာပွဲ
သမိုင်းမှာ နာမည်တင်ကျန်ရစ်တာ အတူတူပါဘဲ..
တယောက်က ပြည်သူ မိခင်...
တယောက်က..ယုတ်ညံ့ အာဏာရူး ဘီလူးသဘက်
လူ့ တသက်မှာ တခါဘဲ သေပါတယ်..
ရဲရင့်သော အမေ နဲ့ ..ယုတ်ညံ့တဲ့.အာဏာရှင် သန်းရွှေ
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 10:23 PM2comments
ခွေးသေ ၀က်သေသာ သေဟဲ့
ကျန်စစ်..ငါ့ကို သတ်ဖို့ လာခိုးတယ်။
ဘုန်းကြီးတုတွေ..ငါ့ကို သတ်ဖို့ လာတယ်။
သဗ္ဗေ သတ္တာ ကမ္မသကာ
ကံသာလျှင် အမိ၊ ကံသာလျှင်အဖ
ကံပစ်ချရာနေ ကံကပေးတဲ့ အမွေကိုစား
လူယုတ်မာ ရဲ့ အတ္တဘော
နင်...ခွေးသေ ၀က်သေသာ သေလှည့် "
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 10:14 PM0comments
“ သဲကန္တာရဲ့ ည..
သခင့်ကျေးဇူး အထူး ကျနော်မမေ့ပါ။
အသက်နဲ့ ထပ်တူ ဆပ်မှာ။”
ဒီကုလားအုတ်နဲ့ခရီးသွား
သူ က အသုံးကျသား
“ ကဲ လာလေ ၀င်လာခဲ့ ”
ကုလားအုပ်က တစ်ခါ ထပ်ပြောပြန်တယ်..
မျက်စိထဲ သဲများဝင်လို့ 
“ အော်..သူလေ ဟုတ်ရှာမှာဘဲ..
ရှေ့ တိုး ၀င် ၀င်လာတဲ့ ကုလားအုတ်
ကုလားအုတ်က သူ့ အဖေကြီးထက်လည်။
သူခိ်ုးထက် သူဝှက် ကသာနေတယ်။
မသဒ္ဓါ (၆။ ၈။၂၀၀၉)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 6:37 AM0comments
မင်းတရားရဲ့ လက်မောင်းကိုမြင်လို့ 
မြင်းစီးနေတဲ့ဦးပေါင်းစင်းနဲ့ 
ဆုငွေချမယ် မောင်မင်းတို့ "
ဦးပေါင်းစင်းစ လေ၌လွင့် ရိပ်ရိပ်သဏ္ဍာန်
မည်သူ ဘက်မပြိုင်..မည်သူမှ မဖမ်းနိူင်..
မူးမတ်တွေ ညံ့တာ ၀န်မခံကြဖူး။
ဖမ်းမမိ အမှန် လျှောက်တင်ကြ..
“ မနေ့ က ညချမ်း
ဦးပေါင်းစင်းနဲ့ ရုပ်ဖျက်တာ ငါ..
ငါ့ လက်မောင်း ပျဉ်းတွဲကျ..
သူက မင်းကောင်း ..သက်သေပြကောင်းတယ်။
လူသူ တွဲမ ချ
ဘုရားမုခ်ပေါက်က ဆင်း ချိန်.
မိန့် ခွန်းတောင် ဖြောင့်ဖြောင့် မဖတ်နိူင်တဲ့အချိန်
ဆင်းရင် ဗျင်းမယ် ကြောက်ချေးပန်းနေပြီလား.
စိုးဝင်းလို အလောင်း ထော်လာဂျီပေါ်တင်.
ဦးပေါင်းစင်းနဲ့တူရွင်းတောင်ခြေ..
မသဒ္ဓါ ( ၆။ ၈။ ၂၀၀၉)
ဘုရားလည်းပြို လူလည်းအိုပြီ ငါ့ကိုကြိုးစင်ပို့ပါတော့ ဆိုသော စကားလေးကြောင့် ဒီကဗျာလက်တန်း ရေးမိပါတယ်။ လာရေးပေးသူ သတိပေးသူ အား ကျေးဇုးပါ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:32 AM0comments
ရဲရဲရင်ဆိုင်..သတိပိုင်ဖို့စစ်သည်သို့ 
ရှေ့ ဆက် ဘေးတွေ့ ရဲသလား.
ပြည်သူတွေ ကို ဖြုတ်ထုတ်သတ်
တပ်မတော် သားကြီး မောင်ငယ်..
ရောမ အင်ပါယာ ပြုန်း
နပိုလီယံ စစ်ဘုရင် ငိုကြွေးဘ၀ဆုံး
ထောက်လှမ်းကောင်းတဲ့ ခင်ညွန့် 
လူကောင်းလောကထဲလည်း ဆန့် ဝင်မကြွယ်
သင့် အနာဂတ် ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ် ???
သင့်အလှည့်ဟာ ရမယ် မရေရာ။
ရုရှား စစ်လခ ပေါင်မုန့် ဘဲရတယ်။
မောင်အေးလို အလကားရ အရက်သောက်
နေ့ တိုင်း သင်မမူးနိူင်ပါဖူး.
သင့်သမီး ကို စိန် သင်မဆင်နိုင်ပါဖူး
မသဒ္ဓါ ( ၆။၇။၂၀၀၉)
ဆောင်းပါးရှင် - မောင်ကျောင်းသား (ရုရှားပြန် တပ်မတော် အရာရှိ တစ်ဦး)
မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်သောအခါ ထုံးစံအတိုင်း စစ်ခုံရုံးဖွဲ့၍ ပြန်လာရသော အကြောင်းရင်းကို စစ်ပါသည်။ အဖြစ်မှန်ကို တင်ပြသော် လည်း သံအမတ်ကြီး ဦးတင်စိုးက ကြိုတင်၍ ဖက်စ်နှင့် သတင်းပို့ချက်မှာ ပြန်သွားသော ကျောင်းသားများသည် တပ်မတော်ကို အာခံပြီး အမိန့်ကို မနာခံကြောင်း၊ ထိုသူများကို ထောင်ချထုတ်ပယ်သင့်ကြောင်း စသဖြင့် သခင်အားရ ကျွန်ပါးဝလေသံဖြင့် ဗိုလ်ချူပ်ကြီး မောင် အေး ထံ တင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဗိုလ်မောင်အေး တပည့်စစ်စစ် ဦးတင်စိုးမှာ သူ့စေတနာသူ အကျိုးပေး အနားပေးခံရပြီးပါပြီး။
ထို့ကြောင့် ရုရှားမှ ပြန်လာကြသော ကျောင်းသားများ ကံမကောင်းကြပေ။ သို့သော်လည်း ထိုသူများကို ကျွန်တော် လေးစားချီးကျူး ပါသည်။ မတွန်းလှန်နိုင်သူများမှာ ယခုအခါ ဆုပ်လဲစူး စားလဲရူး ဘ၀တွင် ရောက်နေကြသည်။ ရုရှားမှ တတ်ယောင်ကား ဘွဲ့တစ်လုံး ကိုပိုက်ကာ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ဝေးနိုင်သမျှဝေးအောင် အကြံအဖန်လုပ်ပြီး တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ များသို့ သွားရန် ကြိုးစားနေကြသည်။
ရုရှားတွင် နေစဉ်က ဆရာတစ်ယောက် ပြောပုံမှာ မင်းတို့အရည်အချင်းနဲ့ နျူးကလီးယားစက်ရုံ တည်မယ်ဆိုတော့ အနာဂတ်က တော်တော်ရင်လေးစရာပါပဲတဲ့။ ဟုတ်ကဲ့။ ဖြစ်နိုင်လောက် ပါသည်။ စာသင်ချိန်တွင် ရုရှားကျောင်းသားများလို ကျားကုတ်ကျားခဲ မကြိုး စားပဲ ဗိုလ်လောင်း ဘ၀ကလို လစ်လျှင်လစ်သလို အိပ်ကြသည်မှာ မြန်မာ ကျောင်းသားများသာ ရှိပါသည်။ တကယ်ကြိုးစားသည့် ကျောင်းသားများလည်း ရှိပါသည်။ တချို့ ကျောင်းသားများလည်း ယခုအခါ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် တပ်မတော်ကို ကျောခိုင်းသွား ကြပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါတွင် နျူကလီးယား လက်နက်ကို ထိုထိုသောပညာရှင်များနှင့် ထုတ်လုပ်ရန် စဉ်းစားနေကြသော အာဏာရူးတစ်စု၏ အနာဂတ် ကို စောင့်ကြည့်ရုံသာ ရှိပါတော့သည်။
http://www.photayokeking.org/?p=3367 မှသတင်းဆောင်းပါး ကိုခံစား၍ရေးပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ မောင်လေးဖိုးတရုတ်။
တိုင်းပြည်သာယာမှ..စစ်တပ်ကောင်းစားမှာပါ။ စစ်တပ် ကောင်းစား၍ တိုင်းပြည်သာယာရိုးမရှိ..
သင်၏ မြေသည်…သင်၏အတွက်..အေးအတူပူအမျှ မောင်နှမ အားလုံးမှီတင်းနေထိုင်ရန်အတွက်..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 4:27 PM0comments
စဉ်းစားရ ခက်မနေနဲ့ ..မိတ်ဆွေ..
ရှေ့ ဆက်တက်ဖို့ ဘဲရှိသည်။
ဆပ်ပြာရည်နဲ့ဝမ်းချမလား
ရင်ထဲက..အဆိပ်တွေ ထွက်သွားဖို့ ဘဲ
ရှိတာနဲ့ သုံး..အချိန်မဖြုန်းနဲ့ 
ရေရဲ့အသက် တမနက်ဘဲခံတော့တယ်။
စစ်တပ်တွင်း ပုန်ကန်မှု။ နိူင်ငံတော် လုပ်ကြံမှု.
၀န်ထမ်းသပိတ် လယ်သမား သပိတ်
ကြမ်းချင်တဲ့ ကိုရွှေဘတွေ တက်ကြမ်း..
နူချင်တဲ့ ရွှေပြည်အေးတွေ လည်းလက်ကမ်း
တိုင်းတပါးအကူ ငိုညည်းသူ ငိုညည်း
ပြခဲ့ပါ..သင် မည်သို့ သောလူ
ဘယ်ကျောက်တောင် ဘယ်လောက် မြင့်မြင့်..
တနေ့ မှာသဲပွင့် ဖြစ်တာချည်းဘဲ..
သင့် အမျိုး အရောင်ကို ၀င့်ထယ်..
ဒီပွဲ မှာ ဒို့ တွေ နိူင်နိုင်ပါတယ်။
ဘာ တာဝန်ဘဲ ရရ..
ဘယ် နေရာဘဲ ကျကျ..
လွတ်လပ်ရဖို့ဒို့ ဘိုးဘွားမြေယာ..
ဒို့ အားလုံးပိုင်..အားလုံးနိုင်စေဖို့ 
အာဏာရှင်ကို ဖီဆန်ကြစို့ 
မသဒ္ဓါ ( ၆။ ၇။၂၀၀၉)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:53 AM0comments
လူကိုသာ သတ်လို့ ရမယ်..
ခန္ဓာကိုယ် ထောင်ချဖမ်းလို့ ရချင် ရမယ်..
ဒို့ တွေ တော့ လမ်းဆက်လျှောက်ဆဲ။
မိုင်.. (၉၀၀) ကန္တာရခရီး..
ဒို့ ချွေးတွေ ဘဲ ခမ်းပစေ..
ဒို့သွေးတွေဘဲ..ခမ်းပစေ..
ဒို့ တွေ တော့ ခရီးဆက်နေမယ်။
စစ်သံဖနောင့်အောက် ငတ်မွတ်သော ပြည်သူများရဲ့..
ကျနော်တို့ခရီးဆက်..
UN ရုံးရှေ့ မှာ..အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြကြမယ်..
ရဲဘော်၊ မင်းရွှေဦး (ခေါ်) ချစ်လွန်းသူ့ 
ရဲဘော် ကဘောယူ ။ ရဲဘော် စောငို
မြန်မာပြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ခရီးရှည်
မသဒ္ဓါ ( ၆။၆။၂၀၀၉)
မိုင် (၉၀၀) ကျော် ခရီးရှည် ချီတက်နေသော။ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမည့် ရဲဘော် (၅)ဦး အပါအ၀င်..ပြန်ကြားရေး ရဲဘော်ကျော်ထွန်း တို့ အတွက် မြန်မာပြည်သားများ၏ ကိုယ်စား ဂုဏ်ယူလေးစားမိပါတယ်။ အရေးတော်ပုံအောင်ရမှာပါ။ ရဲဘော်တို့ ၏ စွန့် ဝံ့ စွန့် စားသော စိတ်ထား အတွက်..အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဤခရီးမနီးပါ.သိပါသည်။ သို့ သော် တနေ့ တစ်လံ..ပုဂံက ဘယ်ရွေ့ မည်လဲ။ အားသာခဲပါ ရဲဘော်..မနက်ဖြန် သည် ဒို့ ရဲ့အဖော်..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 10:52 PM 1 comments
ဒိုင်ပွဲရပ် နိူင်ချင်လျှင် အလဲသာဆက်ထိုး.
မောင်နှမ သားချင်းတို့ 
အသိနဲ့စာနာမလား။
သိပါရက်နဲ့သတ္တိကြောင်တဲ့လူပါး.
ရပ်ကြည့်နေတဲ့ သူတွေ များရင်
မြန်မာပြည် နွံ့ ထဲစုန်းစုန်းမြုပ်တော့မယ်။
သူ အရင်..ငါ အရင်
အထဲက "စ" မလား..အပြင်က"ကြွ" မလား..
အထဲက "ထ" မလား..အပြင်က "ဟ" မလား..
လူရုပ်လည်းမပီ..ဒါ ဒို့မြန်မာပြည်။
ဘာသာတိုင်း ချိုးနှိမ်သည်. ဒါ ဒို့မြန်မာပြည်။
မသေချာတာ အာဏာရှင်ပြောတဲ့ ဒီမိုကရေစီ..
ဆည်ရေတိုးပြီး ရွာတွေ မြုပ်တော့မယ်။
တောတောင်မြေဆီ ဆုတ်ပြီး တောင်ကတုံးဖြစ်တော့မယ်။
စပါးဆန်ရေ ပို့ မဲ့နိုင်ငံခြား..ပြည်သားက ငတ်မွတ်တော့မယ်။
ပတ္တမြားကျောက်မြက်ကျွန်းသစ် ..စိန်တွေ ဘဲဖြစ်သွားတယ်။
HIV အန္တရာယ်ကြောင့် တမျိုးလုံး..ပြုန်းပြုတ်ရော့မယ်။
ကလေးတွေ ပညာမဲ့..စစ်သားဘဲ ဖြစ်တော့မယ်။
ရွှေုပြောင်းအလုပ်သမား တိုင်းတပါးက ဂုတ်သွေးစုတ်တော့မယ်။
မြန်မာမှန်ရင်..သူတောင်းစားသူခိုးများ လူ အထင်သေးကြတော့မယ်။
မြန်မာ အမျိုးသားစိတ်ဓါတ်..မြောင်းထဲဘဲ အောက်တန်းကျနေမယ်။
ဝံသာနု ရက္ခိတ တရား..ခွေးစားသွားပြီလား။
အာဏာရှင်ကိုပယ်..ဒို့ ခေတ် ရောက်ရမဲ့အရွယ်။
ထိမှ နာမနေနဲ့ ..
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျ ဖင်ကျောက်ချ ငုတ်တုတ်
စိတ်ဓါတ်ရှိ ပါဝင်လိုသူ..အဝေးထွက်ပြေး ဆုံးရှုံး.
တိုက်ပွဲအောင်မြင်ရန် စည်းရုံးရေးက အရေးကြီးပါသည်။
ရဲဘော် ခေါင်းဆောင် တသားထည်း တိုက်နိုင်ရပါမည်။
တကဲ့ စေတနာသာ ပါ..သင်သည် ဖြစ်နိူင်ပါတယ်.တစုံတရာ
အနာဂတ်တို့ နဲ့လင်းလက်နေတာ ဤမြေကမ္ဘာ
အလုပ်၏ ရူပဗေဒ ညီမျှခြင်း
အား မစိုက်ရင် ၀န်က မရွေုလျှား
အားက မပါ..၀န်က ရွေ့ မလာရင်
တကယ် လိုချင်..တကယ် လုပ်ကြရမယ်..
ဒါ အသက်လုပွဲ..ဒါ တိုင်းပြည်ပြန်လုပွဲ..
လဲလို့ မဖြစ်..ကွဲလို့ မဖြစ်..
ဒိုင်ပွဲရပ်နဲ့ဒို့ နိုင်ဖို့ ကအဓိက..
မသဒ္ဓါ ( ၆။ ၅။၂၀၀၉) ညီညွတ်ရေးနှင့်..အပြောမဟုတ် လက်တွေ့ဘ၀များသို့ 
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:29 AM0comments
သူများခေါင်း နင်းပြီးမှ စားတယ်
တချို့ သူတွေက သာမန်
မဟုတ်တာ ငုံ့ မခံဖူး..
အညတြဘ၀ အနစ်နာခံရန် ဘ၀င်မမြင့်
အသိစိတ်နဲ့ ဘဲ တာဝန်ထမ်းမယ်။
စေတနာအရ သာ အလုပ်လုပ်မယ်..
အမိန့် ကြောင့် အလုပ်မလုပ်ဖူး။
စိတ်ယုံကြည်မှူအရ သာ အရှေုတိုးမယ်..
ဘယ်သူ နှိမ်ကွပ်ကွပ် ဦးမကျိုးဖူး.
တိုင်းပြည် ချစ်သူ..အမျိုးကို ကူ..
လဲနေသူတွေ ကို ထူပေးမဲ့သူများ..
ဘ၀တူလူ တွေ အပေါ်
အောက်ခြေကဘဲ ထောက်ပို့ ရ ပို့ ရ
စည်းရုံးခြင်းသာ ဒို့ လက်နက်..
ငိုသံတွေကြား..နားများပါးကြစို့။
မတရားမှူကိုမြင် မျက်လုံးပိတ်မနေကြဖို့ ။
ကြယ်ကလေး ဘယ်လောက် မှိန်မှိန်..
သေရမှာ ဘယ်လို ကြောက်ကြောက်..
ချောင် တစ်ချောင် မှာပိတ်
သေးနွယ်နွယ် မြက်ဖျား အမှိုက်စ..
လောင်မီးတို့ စ နိူင်တယ်။
ဂန္ဓ၀င် မဖြစ်ပေမဲ့ ..
သမိုင်းမှာ သင် တာဝန်ကျေ..
စွန့် ရဲတဲ့ ဇာနည်ဆွေ..
စုရုံးပါလှဲ့အမိမြေအတွက်..
မမှိန့် တမှိန် သင့်နာမည် လေးထားခဲ့ပါ။
မသဒ္ဓါ (၆။၄။၂၀၀၉ ) အရေးကြီးပါပြီ သွေးနီးကြပါစို့ ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:18 AM0comments
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 7:49 AM0comments
အခြေအနေမဲ့ တဲ့ ကပ္ပိယ..
ကနန်းအသား ကို သိပ်ကြိုက်လှ
ဘုန်းကြီးကျောင်းသား နှိုက်လာတဲ့ ကနန်း..
လမ်းလျှောက်တော့ ဒီ ကနန်းရယ်
မူးဝေမိုက် အိုးထဲ ကျမှ
စားရလေပြီ သူ ကြံတော့
ဆူဝေပွက် ရေနွေးအိုးရဲ့ တန်းပေါ်
ကပ္ပိယကြီး အတော် ဂွကျ
တရားမဲ့တဲ့ ပိတ်ဖြူပတ် စစ်သားလူထွက်
မတရား ညစ်ပတ် မညှာမတာ ဆိုရက်တယ်…
မသဒ္ဓါ (၆။၂။ ၂၀၀၉)
အမေစု ရေ..သိက္ခာတရားရှိသူဟာ..ဘယ်သူကိုမှ မိမိ သိက္ခာ သစ္စာရှိတာ ဘာမှ သက်သေ ပြစရာ မလိုပါဖုး..ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သိက္ခာနဲ့ သစ္စာဟာ မိမိနဲ့ အတူအရိပ်လို မကွဲမကွာ နေ နေ လို့ သာပါဘဲ။ သိက္ခာ မရှိသူသာ.. သူတပါးကို လက်တို့ငါကောင်းကြောင်း ထောက်ခံပေးဖို့ ပြောတာပါ။
ဘယ်သူ ဘာ..လူတွေ အားလုံးနားလည်ပါတယ်..
လူတို့ ၏ ဂုဏ်
အပြောနဲ့ လူတွေ မယုံဖူး
မိမိ ဖာသာ ဂုဏ်တင်မရတတ်ဖူး
လူတွေ ရဲ့ ယုံကြည်မှူ နဲ့ မေတ္တာခံယူမှု
လေးစား ကြည်ညိုမှု ဆိုတာ
လူလေးစားခံရသူ အဖော်မပါ လူထဲဖြတ်လျှောက်ရဲတယ်။
မြန်မာ့ ဂန္ဓ၀င် အမျိုးသမီး..
မြန်မာ အမျိုးသမီးများရဲ့ ရွန်းတောက်ကြယ်..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 10:41 PM0comments
ဤအရာကိုဖတ်၍ ခံစားပါသည်။ သနားမိသည် ဦးသန်းရွှေ။ ရွှေ့ တတ်လိုက်တာ။ .ရီစရာ ကလေးကွက် ကလေးတွေ..checkmate အလုပ်ခံထား ရရှာသောဦးသန်းရွှေ..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 10:24 PM0comments
ပြည်သူ မေတ္တာစားတဲ့ မျိူးချစ် ဒို့ တပ်မတော်သား
တပ်မတော်က အဖ မဟုတ်ဖူး။
ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ ကိုတော်လှန်ဖို့ 
တိုင်းပြည်ကို လွတ်လပ်စေချင်လို့ 
ပြည်သူ့ ရင်သွေးများနဲ့ဖွဲ့ စည်းခဲ့တာ
ကြည်းရေ လေ၊ ဘယ်တပ်ဖြစ်ဖြစ်
အရာရှိ၊ အကြပ်တပ်သား ဘယ်အဆင့်ဖြစ်ဖြစ်
နေ့တိုင်း မနက် ညနေ နှစ်ကြိမ်
ရွတ်ဆိုကြရတဲ့ အဓိဌာန် လေး ချက်
နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားတို့၏ သစ္စာကို
(၂) ငါတို့သည် ကျဆုံးလေပြီးသော
အမိန့်နှင့် တာဝန်ကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ပါမည်။
(၄) ငါ့နိုင်ငံတော် ငါ့နိုင်ငံသား
ငါ၏အသက်ကို စွန့်လွှတ်ရန် အဓိဌာန်ပြုပါ၏။
ဒါ တပ်မတော်သားတိုင်းရဲ့ အသက်
ရဲဘော်တို့ ..ငါတို့ မှာတာဝန်ရှိတယ်
ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ဖို့ ဖြစ်တယ်။
ပြည်သူတွေရဲ့ ကိုသတ်ဖို့ 
ပြည်သူ့ ရင်သွေး.များ မုဒိန်းကျင့်ရန်မဟုတ်။
အမိန့် ကိုလိုက်နာလေးစားဖို့ 
အမိန့် ပေးသူရဲ့ အကျင့်စာရိတ္တက အရေးကြီးတယ်..
သူ ဘယ်သူလည်း။ သူ့ လုပ်ရပ်ကဘာလည်း။
ပြည်သူဘက်က ရပ်တဲ့ တပ်မတော်သား.
ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း စိန်မြ၊ ဒု ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းအေးမြင့်
ဗိုိလ်ကြီးဟောင်း မင်းသိမ်း။ ဗိုိလ်ကြီးဟောင်း စိန်သောင်း။
ဗိုလ်ကြီးဟောင်းဝင်းဌေး။ ဗိုလ်မှူးဘသော် (မောင်သော်က)
တပ်ကြပ်ကြီးဟောင်း ညိုမှိုင်း။ တပ်ကြပ်ကြီးဟောင်းရွှေဘ။
အစရှိသော ပြည်သူ့ တပ်မတော်သား
ဗိုလ်ကြီးဟောင်းဇော်ညွန့် ဆိုတဲ့ ကျနော်
ပြည်သူရှေ့ ကဘဲ ရပ်တည်သူ
ဂုဏ်သိက္ခာ ဘဲ စားသူ
ရဲသော် ငရဲမလားတဲ့ လူ
အိမ်ကြက်ချင်း အိုးမည်းသုတ်တာ နအဖ
တပ်နဲ့ ပြည်သူ အိုးစားကွဲစေချင်တာနအဖ
စစ်တပ်ဆိုတာ အမိန့် နာခံပေမဲ့..
စစ်သား ဦးရေ ငါးသိန်း..
ဘယ်နှစ်ယောက် နအဖဖက် ယိမ်းပါသလည်း။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ တာဝန်ကျေ
မဲအပြည့် ပေးရဲတဲ့ တပ်မတော်..
ပြည်သူ့ ရင်သွေး..သတ္တိများနဲ့ တပ်မတော်
လွတ်လပ်သော ရွေးကောက်ပွဲ မဲစံနစ်သာ ထပ်ပေးကြည့်
တပ်၏ ၈၀%..ဒီမိုကရေစီ စံနစ်ဘဲ သုံးမယ်။
တပ်မတော် အနှစ်သာရ အတွင်းတိမ်။
မိမိ အကျိုးစီးပွါးလုပ်သူ မှန်သမျှ
နိုင်ငံတော်နဲ့ ပြည်သူအပေါ် သစ္စာဖောက်သူ
ရဲဘော်တို့ ..တပ်မတော်သားအားလုံး၏ ရန်သူ
ငါတို့ ၏ သံဓိဌာန်..
တပ်ဆိုတာ ပြည်သူ့အကျိုးဘဲဆောင်ရရိုးရှိတယ်။
ဒို့ မြေးတွေ လက်ထက်ကျ
အလင်းရဖို့အချိန်တန်ုပြီ။
ငါ့အကိုတို့ ရေ ထွက်ခဲ့ကြ
ငါ့ညီတို့ ရေ ထွက်ခဲ့ကြ
ငါ့သားတို့ ရေ ထွက်ခဲ့ကြ
ငါ့တူတို့ ရေ ထွက်ခဲ့ကြ
ဗိုလ်ချုပ် ရဲ့ တိုက်ပွဲဝင် မိန့် ခွန်း..
ဒို့ တိုင်းပြည် အနာဂတ်လှရအောင်..
”စစ်တိုက်တော့်မဲ့ ဆဲဆဲ ၊ စစ်တိုက်လို့ ကျည်ဆံသင့် သေမဲ့ဆဲဆဲမှာ ဒို့တိုက်တာ လွတ်လပ်ရေး ရမှ ရပါ့မလားဟေ့။ ကျုပ်တော့ဖြင့် သွားပြီ။ တိုင်းပြည်မှာ ကျန်ရစ်မယ့် ခေါင်းဆောင်မယ့် လူကြီးတွေကို ပြောလိုက်ပါ။ ကျုပ်တို့ တာဝန်ကျေပြီ။ ခင်ဗျားတို့ တာဝန်ကျေအောင်လုပ်ပါ။ မလုပ်ရင်တော့ ကျုပ်တို့ ဘ၀ အဆက်ဆက် တိုင်းက ဘာလုပ်မယ်။ ညာလုပ်မယ် အစရှိသဖြင့် မြည်တမ်းသွားတာတွေဟာ ကျန်ရစ်နေတဲ့ ရဲဘော်တွေနဲ့ ကျုပ်တို့အားလုံးစိတ်ကို အင်မတန် ထိခိုက်အောင်ဖြစ်တယ်”
(ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ မိန့်ခွန်း)
“ရဲဘော်တို့ မေးစရာ စကားရှိတယ်။ တကယ်လို့ အကြီးအမှူးတွေထဲက ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကျိုးငဲ့ပြီး လူမျိုးရဲ့အကျိုးနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံ ဆန့်ကျင်တဲ့ အကြီးအမှူးတွေဟာ ကြာကြာမနေနိုင်ပါဘူး။ အချိန်တန်တဲ့အခါ ပြုတ်ကျမှာပဲ။ ရာဇ၀င်မှာ ကြည့်လိုရှိယင် ဘယ်လောက်ကြီးတဲ့လူဖြစ်ဖြစ် မတရားလုပ်တဲ့အခါ ပြုတ်ကျတာ ချည်းပဲ။ ဒီလို မတရားတဲ့ အကြီးအမှူးတွေရှိယင် ရဲဘော်တို့ အပေါ်မှာလဲ တည်တယ်။ ဥပမာ မတရားတဲ့ အကြီးအမှူးတစ်ယောက်က ၀တ္တရားနှင့်မဆိုင်တဲ့ နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးအကျိုးနဲ့ မပတ်သတ်တဲ့ အမိန့်မျိုးပေးတဲ့အခါ အမိန့်ဟာ နည်းကျ၊ မကျ၊ တရား၊ မတရား နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးမှာ အကျိုးရှိမရှိ ကြည့်ရမယ်။ အဲသလို ကြည့်တဲ့အခါ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ မရှင်းယင် သူ့ထက်ကြီးတဲ့ အကြီးအမှူးကို ဖြစ်စေ၊ တစ်ခြား အကြီးအမှူးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ် သွားမေးရမယ်။ ဒီအခါမှာ ရဲဘော်တို့ဟာ ဘယ်ဒင်း မှန်တယ်၊ မှားတယ် သိနိုင်မယ်။”
ပြည်သူ့စစ်သားများသို့ စစ်သားတဦး၏ အမှာစကားများ http://shwezinyaw.wordpress.com/2009/02/08/
တပ်မတော်သားများရဲ့ပိုင်ရှင်အစစ်ဟာ ပြည်သူတွေသာ ဖြစ်တယ် http://www.dpnsburmese.org/article/tatmatawthar.html
မေလ (၂၈) ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီ မိနစ် ၂၀ ခန့်က ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန်ထောင်ရှေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးရန် တကိုယ်တော်တောင်းဆိုဆန္ဒပြသည့် အသက် ၅၆ နှစ်အရွယ်ရှိ အငြိမ်းစား လေတပ်ဗိုလ်ကြီး ဇော်ညွန့်အား အရပ်ဝတ်နှင့် နအဖ လက်ကိုင်တုတ်များက ၀ိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးနေစဉ် (ရိုက်တာ)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:27 AM0comments